Ukukhathalela i-guppy fry | Ngeentlanzi
Nje ukuba kufezekiswe oko Ukuqandusela kwentlanzi eguppy Unonophelo olukhulu kufuneka lwenziwe ukuze baphile kwaye babe yinxalenye yoluntu ngaphandle kwengxaki. Nangona ziluhlobo olunomdla kakhulu kwaye kulula ukuzikhulisa, i-fry ifuna iimfuno ezithile kunye nokhathalelo ukuze baphile, ngakumbi de babe banokugqibelela. kukhuselekile ukuba kungatyiwa.
Ukuba uthanda ukufuya iintlanzi zeguppy, kuya kufuneka uthathele ingqalelo iimeko kunye nemilinganiselo ye-aquarium ukuze ungagqithisi, kuba umntu ngamnye obhinqileyo unokuba phakathi kwabali-10 ukuya kweli-15 abaselula. Izityalo akufuneki zisilele kuba ziya kusebenza njengendawo yokubalekela ifry, okanye zibeke ibhokisi yentsana ukuze igcinwe ikhuselekile, kufuneka kukhunjulwe ukuba iintsana zabazali zihlala zitya abancinci, kuba ayizizo iintlobo ezibakhuselayo.
La Ubushushu be-Aquarium mabube malunga ne-24ºC kwaye amanzi ahlala ecocekile ngokupheleleyo kwaye ahlanjululwe ukuze akhule kakuhle. Ukutya kwabo kubalulekile kuphuhliso lwabo olufanelekileyo, kuba kuyacetyiswa ukuba ubanike ezona guppies zihlala zitya, ukuba ngaba zizikali kufuneka usile ukuphucula ukutya kwabo kwaye uhlala kane okanye kahlanu ngemini.
Kuya kufuneka ugcine intlanzi encinci, nokuba ikwi-aquarium eyahlukileyo okanye kwi-aquarium ephambili, kwaye nangona kunjalo, kuya kufuneka uqiniseke ukuba Unyango alukho kumandla aphezulu kuba zinokufunxwa ngenxa yesayizi yazo encinci.
Kuya kufuneka uqaphele ifry kuba ezinye azinakukhula ngaxeshanye nezinye okanye zibe lixhoba lesifo esinokuchaphazela iqela. Akufanele unike amayeza kuba asinakumisela idosi efanelekileyo, kungcono khupha umntwana ogulayo.
Ukuba i-fry iphakanyisiwe kwiimeko ezifanelekileyo, zilula kakhulu nakwabaqalayo, kwiiveki nje ezimbalwa baya kuba yinxalenye yeqela lezikhulu. A Guppy eyindoda isabelana ngesondo kwinyanga enesiqingatha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Guppy » Ukukhathalela i-guppy fry